Iyo yekubudirira nyaya yePrestaShop uye zvazvinoita paEcommerce muSpain | ECommerce nhau
Iyo yekubudirira nyaya yePrestaShop nemhedzisiro yayo paEcommerce kuSpain
Susana Maria Urbano Mateos | | Kutengeswa kweIndaneti, SEO
PrestaShop ndeye zvemukati manejimendi system, yakanangana nekugadzirwa kwe online e-commerce zvitoro. Yakatangwa muna 2007 uye kubvira ipapo yakawedzera timu yebasa kubva kuvashanu kusvika 5 vashandi, nemahofisi kuParis neMiami. Iyo kambani nguva pfupi yadarika yakazivisa kuti 75% yezvitoro zvepamhepo muSpain zvakagadzirwa nepuratifomu iyi, nepo mumakore maviri chete, anopfuura makumi maviri emapeji eEcommerce akavhurwa munyika ino.
1 Iko kutanga kwePrestaShop muEcommerce
2 PrestaShop muSpain
Iko kutanga kwePrestaShop muEcommerce
Pakaburitswa muna 2007, PrestaShop yakawana anodarika 1000 kurodha pasi, kubvumira mazana maviri ezvitoro zvepamhepo kuti zvirambe zvichishanda. PrestaShop parizvino ine zvinopfuura mazana matatu maficha, anopfuura mazana matatu nemazana mashanu emamojuru nematemplate, pamwe nenharaunda ine nhengo mazana mashanu, kuwedzera kune software inowanikwa munzvimbo makumi matanhatu dzakasiyana.
Nokuda kwe2013, PrestaShop yakanyoreswa zvinopfuura mamirioni matatu kurodha pasi, nepo parizvino yatove nezvinopfuura zana nemakumi mashanu ezviuru zvekushambadzira online, izvo zvinotitaurira nezve mukurumbira wayo uye nei iri imwe yeakanakisa e-commerce mapuratifomu.
MuSpain pari zvino pane 43.000 zvitoro zvepamhepo, izvo makumi matanhatu muzana zvakagadzirwa zvichishandiswa PrestaShop ecommerce software. MuSpain chete, kambani iri kutarisirwa kubhadharisa mamirioni mamirioni kubva kubhadharo yekomisheni yekutengesa zvigadzirwa zvePrimiyamu.
Kuwedzera kune izvi, PrestaShop inopa kusangana neAmazon uye mazana matatu emamwe mashandiro epuratifomu. Mimwe yemakambani anozivikanwa uye makambani muSpain anoshandisa PrestaShop anosanganisira Bimba y Lola, Custo Barcelona, ​​pamwe neEspanyol nhabvu nhabvu.
Sekureva kwaBertrand Amaraggi, Managing Director wePrestaShop kuSpain, chidimbu chezvitoro zvepamhepo musika unokura zvakanyanya Nekuti maSME akaona kuti mari inogona kuitwa kutengesa pamusoro peInternet, nepo makambani makuru atanga kuvimba neyakavhurika sosi software.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kutengeswa kweIndaneti » Iyo yekubudirira nyaya yePrestaShop nemhedzisiro yayo paEcommerce kuSpain
Ruben Ming akadaro
Chinyorwa chakanakisa, pasina kupokana pano muSpain neFrance, Prestashop ndiye anokunda pakati peE-commerce mapuratifomu uye chinhu chakakosha kuve nharaunda inotenderera nehurongwa uhu, izvo zviri kuita kuti ivandudze zuva nezuva. Iko kusunganidzwa kweSymfony mune yayo nyowani dhizaini yeshanduro 1.7 kwave kuri kubudirira.
Pindura Rubén Ming
Chii chinonzi emotional web design muecommerce?
Amazon ikozvino inounza chikafu chitsva kumba kwako